Fantaro ny milina fanapahana laser |
Inona no atao hoe fanapahana laser MAVOATRA
Mampiasna laser laser ho an'ny angovo avo lenta ho fitaovana fanapahana hanapahana fitaovana mavesatra hazavana MAFANA? Fanapahana avo lenta Fahombiazana avo lenta tsy fifandraisam-peo fanapahana fitaovana isan-karazany Adaptability sy Flexibility Ahoana ny famaritana santionany mahay? Ahoana ny fomba fanapahana Qual ...
Fikojakojana ny fitaovana fanapahana laser
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia milina fanapahana laser an'ny orinasa sinoa, ny tsena ananany dia mirongatra ihany koa. Amin'ny fampandrosoana ho avy, ny milina fanapahana laser dia azo ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany. Ireo milina fanapahana laser ankehitriny dia fitaovana fampitaovana mavesatra be ...
Tombony azo amin'ny milina fanamafisana
Ny tombony amin'ny milina fantsom-boasary laser Flexibility: mety ny manamboatra vokatra miendrika fika Hafa ny fahombiazana • ny hafainganam-pandehan'ny welding dia 2-10 heny haingana kokoa noho ny hafainganam-pandeha fanodinana nentim-paharazana • mifanaraka amin'ny maodely marobe, ary ny fotoana fohy fanovana Misy kalitaon'ny welding mahery • tsia distorti ...
Torolàlana momba ny fanoherana ny hatsiaka ny mpamorona laser
Manjary mangatsiaka be ny andro. Ny mpanjifa dia miahy ny amin'ireo fanontaniana momba ny fanoherana ny hatsiaka ny mpamorona laser toy ny etsy ambany: Inona no mari-pana fitahirizana ny generator laser? Raha toa ka mila ranon-tsavony fanoherana ny hatsiaka? Ahoana ny fomba hiarovana ny fantsom-pitetezana rano rehetra sy ireo ...
Fikojakojana ny rafitra fanosotra
Ny rafitra fanosorana milina dia mitazona ny asa mahazatra dia tena zava-dehibe amin'ny masinina. Mila manao fikojakojana isan'andro. Raha tsy misy lubrication tsara ho an'ny masinina, toy ny fiara tsy misy menaka motera. Ka mahatsiravina ve ilay masinina azonao sary. Làlan-dalan'ny milina fanodinana masinina ...